Isandla sekhofi grinder eco-friendly alumina conical burr China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Ceramic Grinding Burr > I-Ceramic Conical Burr ye-Coffee grinder > Isandla sekhofi grinder eco-friendly alumina conical burr
Isandla sekhofi grinder eco-friendly alumina conical burr
I-Alumina conical burr iyisici esiyinhloko ekukhuleni kwekhofi grinder ngesandla, ikhofi yomenzi, ikhofi yokugaya. Njengokuphikisana kwayo okuphezulu, ukusebenza kahle kwe-abrasive, ubumukhuni obukhulu kanye nezindawo zokuqina, futhi nomngane we-eco-friend kanye nezindleko ezengeziwe. Kufanele ucabange ukukhetha okuhle ku-grinder yekhofi.
Siyakwazi ukuhlinzeka ngokukhethwa kombala ohlukile ukuhlangabezana nemfuneko yamakhasimende, njengombala omhlophe, umbala wekhofi nombala omnyama. Ukuze sihlangabezane nalezi zimfuno ezimakethe, sihlale silungiselela isamba esanele sokufinyelela izidingo zamakhasimende ethu isikhathi esifushane.
Ngaphandle kwalokho, sisekela izidingo ze-prototyping ngenani elincane kakhulu. Ukuze uhloniphe ikhwalithi, ukuhlola okubukwayo ngokugcwele kuyadingeka ngaphambi kokuthunyelwa.
I-Alumina Conical Burr
I-spice Grinder i-Alumina Burr